Wararkii ugu dambeeyay baaritaanka kiiska dilkii wasiir Cabaas Siraaji (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay baaritaanka kiiska dilkii wasiir Cabaas Siraaji (DHAGEYSO)
Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo wareeysi siiyay teleefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday halka uu haatan maraayo baaritaanka kiiska dilka wasiir Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Allaha u naxariistee, wasiir Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji ayaa dhawaan lagu dilay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kadib markii illaalo la socotay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed Nuur Faarax Jimcaale ay toogasho ku dileen wasiirka, kadibna uu halkaasi ku geeriyooday.
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in dilka wasiir C/laahi Siraaji haatan loo haayo illaa seddax qof oo ka mid ahayd illaaladii hanti dhowraha guud ee qaranka, islamarkaana la baarayo qofka sida rasmiga ah u ridday xabadda dishay wasiirka.
“Waxaa weli socdo baaritaano, illaa iyo haatan weli lama soo gaba-gabeyn baaritaanka, balse waxaa haatan gacanta lagu haayaa illaa seddax qof, waxayna hay’addaha ammaanka haatan baarayaan cidda sida rasmiga ah u ridday xabadii lagu dhuftay wasiirka” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Ugu dambeyntii, guddoomiye Shuute ayaa uga digay mas’uuliyiinta dowladda iyo illaaladooda oo lagu eedeeyay inay qal qal gelin ku hayaan dadka shacabka ah, xilliyada ay marayaan waddooyinka.
“Waxaa u digayaa mas’uuliyiinta illaalada wata ee isticmaalaya waddooyinka magaalada Muqdisho inay ka feejignaadaan inaysan dhibaateynin islamarkaana aysan qal qal gelin, dadka shacabka ah ee la isticmaalaya waddooyinka, iyagoo awood u sheeganaya, taas oo noqonaysa mid xad-gudub ah” Ayuu hadalkiisa raaciyay guddoomiye Shuute.